KASHIFAAD: Xildhbaan kashifay Siyaasada iyo Sirta ka Dambeysa dib u dhaca Doorashada Soomaaliya | Kismaayo24 News Agency
KASHIFAAD: Xildhbaan kashifay Siyaasada iyo Sirta ka Dambeysa dib u dhaca Doorashada Soomaaliya
Wednesday September 28, 2016 - 12:05 under Somali News by Tifaftiraha K24
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ,oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dib u dhaca mar kale ku yimid Doorashada Soomaaliya, waxa uuuna cadeeyay in dib u dhaca mar kasta ku imaanaya doorashada ay tahay mid Siyaasad ka dambeyso.
Waxa uu sheegay Xildhibaan Goodax in Dib u dhaca doorashada laga leeyahay ujeedooyin iyo siyaasad gaar ah uu sheegay in uu wato Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah Musharaxiinta ku tartameysa xilka Madaxweynaha.
Xildhibaan Goodax ayaa cadeeyay in ujeedka Madaxweyne Xasan Sheekh ka leeyahay in doorashada mar kasta dib u dhacdo ay tahay mid lagu doonayo in dhaqaalo bur bur lagu rido Musharaxiinta kale ee tartanka kula jirta kahor inta aanbo doorashada la gaarin.
”Waxaa ii muuqata in dib u dhaca Doorashada ujeedooyin gaar ah laga leeyahay, waa mida hore Madaxweynaha waxa uu rabaa in Musharaxiinta kahor doorashada ay dhaqalahooda bur buro , waayo Musharaxiinta waxa ay degan yihiin guryo qaali ah , lacag badan ku bixiya ciidamada amaankooda sugaya, halka Madaxweyne Xasan uu Madaxtooyadii wali dagan yahay uusan guri kiro ka bixin ciidana jeebkiisana mushaar ka siineyn” Ayuu yiri Xildhibaan Goodax.
Xildhibaanka ayaa ku eedeeyay Guddiga Doorashooyinka dadban ee Heer Federaal in ay yihiin kuwa maqaar saar ah oo loo keenay kaliya in ay ka shaqeeyaan sida uu tilmaamay danaha Madaxweyne Xasan Sheekh.
Doorashada Soomaaliya ayaa xiligii loo qorsheeyay labo mar dib u dhacday, waxaana wali jira shaki laga qabo in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada marka la eego sida ay hada wax u socdaan.